Ahoana no fiheverantsika ny tenantsika?
"Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin’ny olona rehetra … : Aza miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony hoheverina; fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain’Andriamanitra ho anareo avy." Romana 12:3
"Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha-toy izao ahy." 1 Korintiana 15:10
Matetika ny mpampianatra dia sendra mpianatra matoky tena loatra, mihevitra ho mahay ny zavatra rehetra ka tsy dia mihaino ny torohevitra omena azy. Tankina izy ireny indraindray, mandre ny valim-panadinana… Mifanohitra tanteraka amin’izany, misy koa tanora maro tsy matoky mihitsy ny tenany, misalasala momba ny fahaizany, hany ka tsy mahavita na inona na inona rehefa any amin’ny fanadinana. Manoloana ireo tranga roa ireo, ny mpampianatra dia tokony hahita izay teny sahaza hanarenana ny zava-misy.
Indraindray ny kristiana dia mety ho tonga amin’ny iray amin’ireo tendro mifanipaka ireo, ka tokony handinika izany isika rehetra. Taomin’ny apostoly Paoly isika mba tsy “hiavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony hoheverina”. Mampitandrina antsika io andininy io, amin’ireo zava-doza roa ireo. Mitarika antsika izany hahatsapa ny fironantsika hiavonavona sy hihevi-tena hahavita zavatra tsy nanofanana antsika akory. Nefa milaza amintsika koa, tsy hanambany ny fahaizana omen’Andriamanitra antsika, fanambaniana mety ho vokatry ny tsy fananantsika finoana.
Ny avonavona dia hitondra antsika amin’ny kitoatoa, ary ny tsy fahatokian-tena dia mety hitarika antsika ho kamo sy hidonana-poana. Aoka tsy ho hadino fa “tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” (2 Timoty 1:7). Aoka isika hanompo ny Tompo, araka ny toerana misy antsika avy, manaiky hotarihin’i Kristy sy hanetry tena mandrakariva toa Azy.